Biyyoota Garee H jalatti ramadaman afran - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota Garee H jalatti ramadaman afran
Goodayyaa suuraa Kilaba Baayer Muuniikiif kana taphatu Lewaandoowiskiin garee kana waliin hirmaannaa isaa Waancaa Addunyaa kan jalqabaa ni taasisa.
Ramaddiin garee biyyoota Waancaa Addunyaa irratti hirmaatanii ba'eera. Garee H jelattis biyyoonni kunneen ramadamanii jiru.
Poolaand addunyaa irratti sadarkaa jahaffaa irratti argamti. Geeba addunyaa takkaahuu injifattee baattus gareen amma ijaarame cimaa dha. Baroota 1974 fi 1982 sadarkaa sadaffaan xumurteetti. Kunis qabxii ishee isa olaanaa dha.
Taphataa ijoo: Taphataan kun dorgoommiilee gulaallii geeba Addunyaa kanaaf biyyi isaa Poolaand taphatte sagal keessatti gooliwwan 16 galchuun taphataa goolii hedduu galche ta'eera. Dursaa taphattootaa kan ta'e Lewaandoowiskiin taphoota intarnaashinaala biyya isaaf taphate 91 irratti gooliiwwan 51 lakkoofsiseera.
Leenjisaan Eenyu: Adaam Nawaalkaa bara 2013 eegalee leenjisaa garee kanaa ta'uun taphoota 39 geggeesseera. Waliigalteen garee kana waliin qabu Mudde dhufu kan xumuramu ta'us, Waancaa Awurooppaa bara 2016 irratti garee kana tapha nuusa xumuraan gaheera. Leenjisaa garee kanaa ta'uun Waancaa Addunyaa kana irratti garicha ni gaggeessa jedhamee eegama.
Bara 2002 booda Waancaa Adduunyaa irratti yoo hirmaattu kun kan jalqabaati, bara 2002'tti xumura nuusaaf geessee Turkiin 1-0 mo'amuun dorgommii keessaa baatee turte.
Taphataa adda-duree: Erga yeroo jalqabaaf bara 2012 biyyasaaf hiriiruu jalqabee kaasee galchiiwwan 14 taphoota 48 irratti hirmaatee lakkoofsisuun, kan akka Saadiyoo Maanee muuxannoo qabu hin jiru.
Bara 2015'tti tapha Saawuzihaapitan Astan Viilaa 6-2 ittiin injifaterratti haatiriikii ariifataa secondiiwwan 176 keessati hojjachuun riikoordii galmeessise.
Bara 2016'tti gara Liivarpuul wayita galetti qarshiin paawundii miiliyoona 34 itti ba'e, taphataa qaala'aa Afriikaa isa taasisee ture.
Goodayyaa suuraa Paawundiin miiliyoon 34 kan itti ba'e Maaneen, taphataa qaala'aa Afriikaa ta'e
Leenjisaan Eenyu: Aliwuu Siisee taphataa Senegaal, Poompeeyi fi Birmiingihaam Siitii ture. Ga'eessi umurii 41 kun leenjisummaa dhaabbiitti kan guddatan, leenjisaan duraanaii Amaaraa Tiraawooree bara 2012'tti yeroo ari'aman amaanaadhaan erga garicha fudhatanii booda dha.
Kolombiyaan milkaa'ina guddaan tapha waancaa addunyaa irratti galmeessisan kan bara 2014 nuusa xuuraaf gahanidha. Yeroos Biraaziliin 2-1'n mo'atamuun taphichaan ala ta'an.
Goodayyaa suuraa Hamees Roodrigeez garee Riyaal Maadriid waliin walitti aansuun Chaampiyoons Liigii lama injifachuu danda'eera.
Taphataa Ijoo: Jems Roodriigeez. Taphataan sarara gidduu gara fuulduraatti adeemaa taphatu kan wayita ammaa Riiyaal Maadriid irraa ergisaan Baayern Muuniikiif taphataa jiru kun, waancaa addunyaa 2014 irratti galchiiwwan 6 galcheuun taphataa galchii hedduu galche ta'uun kophee warqee badhaafamee ture.
Leenjisaan Eenyu: Pekermaan erga bara 2012 Kolombiyaa leenjisaa jira. Ergasiis leenjisaa cimaa Ameerikaa Kibbaa ta'uun yeroo sadi filameera.
Bara 1998 irraa jalqabdee adda durummaan dorgommii keessatti kan hirmaattu Jappaan, kan bara 2002 yeroo Kooriyaa Kibbaa waliin Waancaa Addunyaa qopheessanitti dabalatee yeroo lammaffaaf marsaa lammaffaatti darbuu dandeesseetti.
Taphataa ijoo: Keyisukee Hondaa, Shinjii Kagawaafi taphataan fuula duraa Kilabii Leeseester kan ta'e Shinjii Okazaakii taphattoota ciccimoo yommuu ta'an, taphataa dargaggeessi Kilabii Arsenaal kan ta'es taphattoota ganna dhufu kana biyya kana bakka bu'an keessa jira.
Image copyright Kaz Photography
Takumaa Asaanoo biyyasaaf goolii sadii kan lakkoofsise yommuu ta'u waqtii darbe keessasi Arsenaalirraa ergisaan deemee Istuutgaarti Bundasliigaa keessatti akka beeksisaan mo'atu gargaareera. Arsen Winger taphataa waggaa 22 kana "taphataa fuula duraa kennaa qabuufi abdii egeree guddaadha," jedhu.
Leenjisaan eenyu: Vahiid Halilhoodzik, yoo gabaasni kaampii isaanii keessa dhaga'amu dhagaa ta'e jijjiiramni jiraachuu mala. Namni lammii Bosiiniyaa ta'e kun garuu waltajjii Waancaa Addunyaa irratti bara 2014 Aljeeriyaa seenaa ishee keessatti sadarkaa mo'atanii darbuutiin geessisanii hojii cimaa agarsiiseera.
Taphataan sarara duraa Yugoozilaaviyaa kan turan kun gareewwan akka Paariis Seeyinti Jermeeyin, Daayinaamoo Zaagirebiifi Ayivorii Kostiin leenjisaniiru.
Taphattoota Piriimiyeer Liigii: Maayaa Yoshiidaa (Saawuzihaampitan), Shiinjii Okaazaakii (Leestar Siitii), Taakumaa Asaanoo (Arsenaalirraa ergisaan Istuutgaarti)